Tampoka ny fihaonako taminareo teto Andakabe. Tsy mety ny foko, tsy mety ny saiko raha mandalo eto Morondava nefa tsy mihaona aminareo vahoaka. Voaporofo fa tena mifankatia isika. Aza manahy ianareo eto Andakabe Morondava fa tsy maintsy ho valiko avokoa ny fangatahanareo. ISIKA REHETRA HIARAKA HANAVOTRA AN'I MADAGASIKARA.
Ry tantsaha eto Ambondromisotra, omeko kara-tany avokoa ianareo, ahafahantsika mampitombo ny velaran-tany hambolena ary mampitombo ny vokatra. Fantatro ihany koa fa tsy manana herinaratra ianareo eto ka laharam-pahamehana ny hanome herinaratra isan-tokantrano. Ny hangatahiko aminareo dia mahaiza mifidy, mahaiza maneho ny safidy amin’ny 19 desambra izao fa mila tanora mavitrika, mahavita azy ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
ISIKA REHETRA HANAVOTRA AN’I MADAGASIKARA
Noporofonareo teto Belo sur Tsiribihina androany fa tia ahy ianareo. Hanampy anareo aho, hitondra fampandrosoana eto satria fantatro fa mila ahy ianareo. Izaho vonona ary hijoro ho vahaolana.Hiaraka hifanome tanàna isika hiady amin’izao fahantrana izao. TSY MAINTSY TAFITA I MADAGASIKARA
Hanangana orinasa manamboatra fitaovana amin’ny herin’ny masoandro aho na « panneau solaire » ary hisitraka herinaratra ny isan-tokantrano. Ho fongorontsika ihany koa ny asan-dahalo sy ny tsy fandriampahalemana. Tsy adinoko ihany koa ny tohan-dranon’i Mahajilo. Izay rehetra lazaiko tsy maintsy ho tanterahiko.
HIARAKA HANOVA NY TANTARAN’I MADAGASIKARA ISIKA.
Velirano no ataoko aminareo fa tsy maintsy vitantsika ny lalana aty Fenoarivo Be. Matoa aho tonga aty androany dia te hanaporofo aminareo fa hitondra fampandrosoana sy fahazavàna isaky ny tokantrano. Ho ataoko manara-penitra ihany koa ny toeram-pitsaboana. Matoky anareo vahoaka eto aho ary fantatro ny fitiavanareo ahy.
Hanampy anareo tantsaha aho : omeko fitaovana fanondrahana ny lemaka ianareo, ho atao amin’ny vidiny mirary ihany koa ny zezika. Vao tonga Filoha aho dia hametraka fitaovana fanamboaran-dalàna isaky ny distrika dia hamboarintsika avokoa ny lalàna eto Ambalanirana.Hitondra fahazavana aho fa tsy hitondra haizina.
FA NY FITIAVANA NO LEHIBE INDRINDRA